Qaababka Sawirka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | La cusboonaysiiyay 31/03/2022 23:49 | Sawir
Haddii aad tahay sawir qaade ama aad ku shaqeyso sawirro, mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa qaababka sawirrada. Sidan, waxaad ku ogaan doontaa barnaamijyada aad ku shaqeyneyso ama sida loo badbaadiyo sawirada si ay u sii wataan tayada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa jira? Mid walbana maxaa loogu talagalay? Ka dib fiiri waxa aan diyaarinay si aad u ogaato dhammaan fursadaha.
1 Waa maxay qaababka sawirka
2 Qaabab noocee ah ayaa jira?
3 Iyo dhammaan qaababka sawirada, keebaa ugu fiican?
Waa maxay qaababka sawirka
Qaababka sawirada waxaan ku fahmaynaa inay yihiin siyaabaha sawirada loogu kaydiyo kombayutarka, tablet-ka, mobilka, laptop-ka ama kaydinta dibadda, sida disk dibadda ah, flash drive, cd ama dvd. Waa nidaam ay ku kaydsan yihiin dhammaan pixels-ka ka kooban sawirrada.
Sidan, sawirro dhowr ah ayaa la qaadi karaa iyada oo aan loo baahnayn in la daabaco ama laga saaro. Si aad u aragto, waxaad u baahan tahay oo keliya qalab muujin kara pixels-kaas.
Qaabab noocee ah ayaa jira?
Marka xigta waxaan ka hadli doonaa qaababka kala duwan ee aad ka heli karto. qaar baa si fiican loo yaqaan halka kuwa kalena ay aad ugu gaar yihiin xirfadlayaasha ama barnaamijyada gaarka ah.
JPG macnaheedu waa Kooxda Khubarada Khubarada Sawirka. Waa qaab sawirka lagu cadaadiyo inta ugu badan ee suurtogalka ah si uu u miisaan yar yahay. Dhab ahaantii, waxaad ku cadaadin kartaa wax ka badan ama ka yar, laakiin tani waxay saameyn doontaa tayada xun ama ka wanaagsan ee sawirka.
Dhab ahaantii, waxaad leedahay wax wanaagsan iyo shay xun. Warka wanaagsani waa inuu la jaanqaadi karo dhammaan barnaamijyada tafatirka sawirka. sidoo kale browser-yada, software-ka, mobilada, kombayutarada, iwm.
Si ka duwan, Faylasha JPG lama tafatirin karo, mar kasta oo la keydiyo, xitaa haddii aad rabto inaad wax ku sameyso sawirka, waxay lumin doontaa tayada ilaa aysan u muuqan mid wanaagsan dhamaadka. Taasi waa sababta qaabkan loo isticmaalo sawirka kama dambaysta ah, taas oo ah, midka aanad mar dambe taaban.
GIF waa mid kale oo ka mid ah qaababka sawirada ugu caansan, inkastoo inta badan ay la xiriirto sawirada dhaqdhaqaaqa (wax aan qaabab kale samayn karin).
Erayada la soo gaabiyay ayaa ka yimid Qaabka Isdhaafsiga Sawirka oo uu leeyahay dhibaatada kaliya waxay kaydisaa 8-bit oo macluumaad ah, taas oo ah, 256 midab. Ilaa inta sawiradu aysan lahayn midabyo badan, waxay noqon kartaa mid.
Si kastaba ha noqotee, sida aan horay u soo sheegnay, qaababka GIF inta badan waxay diirada saaraan animation, marka ma aha inta ugu badan ee loo isticmaalo sawirada (sidoo kale looma isticmaalo in lagu ilaaliyo tayada wanaagsan ee iyaga ku jira).
Qaabka PSD macnaheedu waa Dokumentiyada Photoshop waana midda uu barnaamijka Photoshop-ka u isticmaalo inuu ku badbaadiyo mashruucyadiisa oo uu hadhow u tafatiro isaga oo aan lumin wax tayo ah. Oo waa in ay badbaadiso lakabyada, kanaalada, iwm. si aad dib u taabato qaybta gaarka ah ee aad u baahan tahay, oo sawirka oo dhan dib ha u dhigin.
Inkasta oo ay jiraan barnaamijyo kale oo furi kara faylashaas, marar badan kuma sameeyaan dhammaan sifooyinka waxaana la doorbidaa inaad isticmaasho kaliya haddii aad haysato barnaamijka. Haddii kale waxa fiican in lagu kaydiyo qaabab kale.
Sidoo kale, faylkan laguma akhriyi karo browser-yada, adeegayaasha, iwm. laakiin waa in aad Had iyo jeer u beddel JPG ama PNG si uu u yaraado oo si sax ah loo soo bandhigo.
Kaydinta sawirka, shaki la'aan, mid ka mid ah kuwa ugu fiican waa BMP. Waxaa loola jeedaa Windows Bitmap waxaana la isticmaalayey ilaa 1990kii. Waxa ay qabato ayaa ah in la cadaadiyo pixels-yada laakiin, si ka duwan qaababka kale, kiiskan ma siinayo pixel kasta qiimaha midabka. Taasi waa sababta ay aad uga weyn yihiin kuwa kale iyo waxay ku habboon tahay oo keliya kaydinta sawirrada, laakiin si aad ugu isticmaasho mareegaha, fiidiyowyada, iwm. waxaa laga yaabaa inay aad u culus tahay.
Faylka PNG waxaa loola jeedaa Sawirada Shabakada La qaadan karo. Waxaa lagu gartaa cadaadinta sawirka laakiin, si ka duwan JPG, ma lumin doono tayada. Intaa waxaa dheer, daah-furnaan ayaa loo isticmaali karaa, wax aan ku dhicin dhammaan kuwii hore.
Dhibaatada kaliya ee ay leedahay ayaa ah in faylka uu noqon karo mid weyn oo taasi ka dhigan tahay isticmaal meel badan ama waqti dheer ku qaado si aad u geliso mareegaha. Taasi waa sababta ay dad badani u sameeyaan sawirkaas JPG si ay u sameeyaan (laakiin waxay ku hayaan PNG si ay ula shaqeeyaan).
Qaabkan waxa lagu tilmaamay in lagu daabaco sawir dhijitaal ah oo tayo sare leh. Waana taas iyada, oo erey-gaabkiisu u taagan yahay Tagged Imaged Format, tayada ayaa ka sarraysa wax kasta oo kale.
Aad uma cadaadiyo, sidaas awgeed aad bay u culus tahay. Maxaa intaas dheer, ma jiraan barnaamijyo badan ama daawadayaal (xitaa browsers) awood u leh inay akhriyaan.
Dabcan, sawirada si ay ugu soo baxaan tayada ugu fiican, tani waxay noqon doontaa qaabka ugu habboon.
Soo gaabinta HEIF waa Foomka Faylka Waxtarka Dheeraad ah, ama Isbaanishka, qaabka faylka sawirka hufnaanta sare leh. Si kale haddii loo dhigo, waa qaab u oggolaanaya tayada ugu sarreysa ee sawirka in la ilaaliyo xitaa marka la cadaadiyo.
Dhab ahaantii, waxaa la yidhi cadaadisku waa labanlaab ka JPG laakiin tayada sidoo kale waa labanlaab.
Dhibaatada? Taasi ilaa hadda ma taageeraan browser-yada iyo sidoo kale barnaamijyada qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid ka mid ah qaababka ay isticmaalaan telefoonada gacanta si ay u kaydiyaan sawiro tayo sare leh.
Tani waa mid ka mid ah qaababka ay u yaqaanaan sawir qaadayaashu sababtoo ah soosaarayaal badan oo kamarado ah ayaa la shaqeeya, sida Kodak, Olympus, Canon, Nikon ...
Faa'iidada ay leedahay waa in ay siin karto ilaa 16384 hooska kanaalka midabka, taasi waa 14 bits, halkii ay ka ahaan lahaayeen 8 in qaababka muuqaalku ay inta badan leeyihiin.
Waxay ku siinaysaa sawirro tayadoodu aad u sarreyso, laakiin faylalku inta badan aad bay u culus yihiin oo sido kale inta badan si fudud looma akhriyo sida kuwa kale ee aan tilmaanay.
Iyo dhammaan qaababka sawirada, keebaa ugu fiican?
Hadda oo aad taqaano qaababka kala duwan ee sawirada, waxaa laga yaabaa inaadan garanayn midka aad isticmaalayso, haddii mid ama mid kale uu ka fiican yahay.
Xaaladeena, Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho JPG ama PNG, kuwaas oo ah laba qaab oo leh cadaadis sare (oo leh khasaare ku jira JPG, iyada oo aan la lumin PNG) iyo cabbir fayl oo aad u jaban.
Si kastaba ha ahaatee, wax walba waxay ku xirnaan doonaan baahiyaha aad qabto ama haddii ay tahay inaad u soo bandhigto sawir gaar ah ama nooca qaabka macmiilka.
Ma kuu caddahay qaababka sawirka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » qaabab sawir
buugag leh dabool qurxoon
Daboolida ugu fiican filimada caanka ah ee taariikhda